डा. भट्टराई एनआरएनएहरुलाई राजनितिक अधिकारसहीतको नागरिकताको पक्षमा - Vishwa News | Popular Nepalase News Media In USA
डा. भट्टराई एनआरएनएहरुलाई राजनितिक अधिकारसहीतको नागरिकताको पक्षमा
पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई उनकैं शब्द सापटी लिने हो भने आफूले कोरेको नेपालको विकास र समृद्दिको मार्ग चित्रलाई मूर्त रुप दिन सहयोगी सिद्द बनोस् भनी देश बाहिरको भ्रमणमा छन् ।
मुलुकको निम्ति अहिलेको एकमात्र आवश्यकता विकास र समृद्दि भएकाले त्यसका लागि सही मार्ग पहिल्याउन समृद्दि हासिल गरेका मुलुकहरुको भ्रमण फलदायी हुने आशा डा. भट्टराईले लिएका छन् । युरोपका देशहरुको भ्रमण सकेर अहिले डा. भट्टराई पत्नी पूर्व मन्त्री हिसिला यमी सहीत अमेरिका भ्रमणमा छन् ।
समयसँगैं विचार पनि फेरिने र विचार गतिशिल रहने बताउँदैं भौतिक विज्ञानका विद्यार्थी डा. भट्टराई आफुले कुनैं समय सामा्रज्यवादको विल्ला लगाएको देश अमेरिकाको भ्रमणलाई अतिरञ्जित गर्नुपर्ने कुनैं कारण देख्दैंनन् । पुरानो विचार र पुरानै शैलीवाट देशको आवश्यकता पुरा नहुने भएरनैं आफुले नया विचार अगाडि सारेको बताउने डा. भट्टराई त्यही आफ्नो विचारलाई फरक रुप र फरक मञ्चवाट सम्प्रेसित गर्न अहिले सक्रिय छन् ।
त्यसो त उनी पछिल्लो समय गैर आवासीय नेपालीको पक्षमा एक कदम अगाडि सरेर अभिव्यक्ति दिदैं गैर आवासीय नेपालीको सहानुभुती समेत बटुलिरहेका छन् ।
शनिवार टेक्ससको डलासमा आयोजित नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ (नेजा)को पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम होस् वा गैर आवासीय नेपाली संघ टेक्सस च्याप्टरले गरेको अन्तरक्रिया होस् वा अनौपचारिक छलफलमा होस् डा. भट्टराई गैर आवासीय नेपालीको सन्दर्भमा भने खुलेरप्रस्तुत भए ।
गैर आवासीय नेपालीलाई दिइने भनिएको नागरिकता सम्वन्धी ऐनमा केही अवरोध हुन सक्ने बुँदा राखिएकोमा त्यसलाई संसोधन गर्न गैर आवासीय नेपाली संघले माग गरिरहँदा डा. भट्टराईले एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली मात्र भनेनन् गैर आवासीय नेपालीलाई राजनितिक अधिकार सहीतकैं नागरिकता दिनुपर्ने पक्षमा आफु रहेको दस्र्याए ।
गैर आवासीय नेपालीका मागमा आफुलाई संसदमा समेत अलि सकारात्मक रहेको देखाउने गरी अगाडि बढेका डा. भट्टराईलाई गैर आवासीय नेपाली संघले समेत राम्रैं मञ्च दिइरहेको छ । युरोपको सम्मेलनमा विशेष अतिथि बनाउने देखि लिएर युरोपका देशहरुको भ्रमणको चाजोपाँजो पनि गैर आवासीय नेपाली संघले मिलाएको थियो ।
अहिले अमेरिका भ्रमणको चाजोपाजो पनि गैर अवासीय नेपाली संघले नैं मिलाएको बताइन्छ । भ्रमण अध्ययन मुलक व्यक्तिगत भनिएपनि डा. भट्टराईको अमेरिकाका विभिन्न राज्यमा गरिने कार्यक्रममा एनआरएनएका नेताहरुले प्रत्यक्ष देखि अप्रत्यक्ष रुपमा भूमिका खेलिरहेका छन् । एनआरएनए अमेरिका देखि एनआरएनए आइसिसीका नेताहरु यसमा सक्रिय छन् ।
अमेरिका आएपछि सार्वजनिक रुपमा वासिंगटन डि.सी.मा पहिलो कार्यक्रम गरेका डा. भट्टराईले टेक्ससको डलासमा भने राम्रैं मञ्च पाए । पूर्व प्रधानमन्त्री दुर दृष्टि राख्ने नेता र अझ भन्दा गैर आवासीय नेपालीको पक्षमा सधैं सकारात्मक रहने नेता भएका कारण एनआरएनएले त्यसमा सहयोग गर्नुलाई एनआरएनए आइसिसीका अमेरिका क्षेत्रका क्षेत्रीय संयोजक गौरीराज जोशी स्वभाविक मान्छन् ।
‘ एनआरएनए आइसिसीले समेत डा. भट्टराईलाई एनआरएनए फ्रेन्डली नेताको रुपमा लिने गरेको छ । ’ उनले भने– ‘डा. भट्टराईको वैज्ञानिक देखि प्राध्यापकहरु भेट्ने लगायतका धेरैं कार्यक्रम रहेको सुनेको छु । धेरैं क्षेत्र घुम्ने र अवलोकन गर्ने कार्यक्रम रहेको बुझेको छु ।’ यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्दछ । र हामीले अन्य क्षेत्रमा कस्तो कार्यक्रम होला थाहा भएन तर टेक्ससमा भने पब्लिकमैं कार्यक्रम गऱ्यौं । यसले उहाका कुरा सुन्ने र उहालाई खुला रुपमा प्रश्न सोध्ने वातावरण मिल्यो ।
नया शक्ति पार्टीका संयोजक डा. भट्टराई पूर्व माओवादीका नेता हुन् । त्यसैले नया विचारको नया शक्ति बनाएपनि समय समयमा पूर्व माओवादी नेता भएका कारण तत्कालिन समयको गुण दोषको भागिदार उनी बनिनैंरहेका छन् र बनिनैं रहनेछन् ।
एनआरएनए टेक्सस च्याप्टरले गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रम हल बाहिर समेत उनका विरोधमा नारा लगाइयो । उनलाई कालो झण्डा देखाइयो । वाहिर विरोध मात्रैं होइन भित्र समेत उनले पूर्व माओवादी नेताका हिसावले धेरैं अप्रिय प्रश्नको सामना गर्नुपऱ्यो । तर उनले विगतलाई कोट्याएर गन्तव्यमा पुग्न नसकिने र सत्य निरुपण आयोग मार्फत धेरैं कुरालाई निरुपण गर्न सकिनेमा जोड दिए ।
धारणा राख्ने क्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. भट्टराइले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको क्षमतामाथिनैं प्रश्न उठाउँदैं नियत राम्रौं भएपनि विकास र समृद्दिका लागि ओलीमा क्षमतामा नभएको बताए ।